Dawooyinka Shiinaha ee Xad-gudubka ah waxay tijaabiyaan soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Tijaabooyinka Xadgudubka Daroogada
Tijaabooyinka Xad-gudubka Daroogadu waa nooc ka mid ah baadhista daawada. Oo ay ku jiraan falanqaynta kaadida joogtada ah, ogaanshaha qaybaha kaadida ee muuqda (sida kaadida unugyada dhiigga cas, unugyada dhiiga cad, iwm.), qaybaha borotiinka go'aaminta tirada, go'aaminta enzyme kaadida, iwm. Baadhitaanka kaadida ayaa aad muhiim ugu ah ogaanshaha kiliinikada, saamaynta daawaynta iyo saadaalinta.
Maandooriyaha Kala Duwan ee Xadgudubka Waxyaalaha ayaa lagu tijaabiyaa, shuruudaha ururinta muunada kaadida iyo daawaynta sidoo kale way kala duwan yihiin. Dhammaan shaybaarrada kaadida waa in lagu ururiyaa weel nadiif ah; Mabda 'ahaan, kaadida dhexdhexaadka ah ee kaadida koowaad ka dib markaad subaxdii kacdo (kaadi subaxda) sidoo kale waa la ururin karaa, iyo kaadida dhexdhexaadka ah ee kaadida random sidoo kale waa la soo qaadi karaa. Muunadaha kaadida subaxda sidoo kale waxay ku habboon yihiin baaritaanka walxaha kale ee kaadida (marka laga reebo shayada baaritaanka kaadida ee 24 saac). Si loo go'aamiyo feejignaanta tuubada kelyaha iyo shaqada milanka, kaadida ayaa la sameeyay ka dib 12 saacadood oo xaddidan biyaha iyo soonka, iyo kaadida ayaa la soo ururiyay saacada 13aad si loo ogaado. Paraffin dareere ah ayaa horay loogu daray weelka kaadida si loo cabbiro shaqada aysiidhka ee tuubooyinka kelyaha. Kahor inta aan la qaadin muunada kaadida ee 24 saac, waa in lagu daraa waxyaalaha lagu kaydiyo weelka ama weelka waa in la dhigaa meel 4â„ƒ ah.
Qaar ka mid ah shuruudaha gaarka ah waa in fiiro gaar ah loo yeesho marka la qaadayo Tijaabada Xadgudubka Daroogada:
â‘ Bukaannada dumarku waa in ay iska ilaaliyaan qaadashada shaybaarada kaadida xilliga caadada;
â‘¡ Waa in aan wax baaritaan kaadi ah lagu samayn shaybaarrada guud ee hematuria (marka laga reebo xuubka kaadida);
(3) Haddii daawadu ay saamayso baaritaanka kaadida, muunada waa in la ururiyaa ka dib joojinta daawada;
â‘£ Haddii ay tahay chyluria, bukaanka waa in lagu wargaliyaa in uu kaadida soo qaado ka dib marka la caddeeyo.
Qalabka Tijaabada Dawada
Waxaan bixinaa Qalabka Tijaabada Maandooriyaha kaas oo ah mid degdeg ah, baaritaan baadhis ah oo lagu ogaanayo tayada hal ama dawooyin badan iyo dheef-shiid kiimikaad daawada ee kaadida bini'aadamka heerar go'an. Waa adeeg xirfadeed oo keliya iyo isticmaalka ogaanshaha in vitro oo keliya.
Hal Tilaabo oo Degdeg ah Qalabka Tijaabada Dawada Candhuufta
Hal tilaabo oo degdeg ah Qalabka Tijaabada Dawada Candhuufta aad bay faa'iido u leedahay. Candhuufta waa isku dhaf kakan oo aan ka koobnayn borotiinno kala duwan oo keliya, laakiin sidoo kale DNA, RNA, acids fatty iyo microorganisms kala duwan. Daraasadu waxay sheegtay in qaybaha kala duwan ee borotiinka dhiiga ku jira ay sidoo kale ku jiraan candhuufta, kuwaas oo muujin kara isbeddel ku yimaada heerarka borotiinnada kala duwan ee dhiigga. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in lagu ogaado cudurka iyada oo loo marayo baaritaanka candhuufta.
Dhakhso Hal Tallaabo Candhuufta Tijaabada Dawooyinka Badan 5 In 1 Gudigga Dawada
Hal tallaabo oo degdeg ah Saliva multi drug test 5 in 1 drug testest panel: Candhuufta waa isku dhaf kakan oo aan ka koobnayn borotiino kala duwan oo keliya, laakiin sidoo kale DNA, RNA, acids fatty iyo microorganisms kala duwan. Daraasadu waxay sheegtay in qaybaha kala duwan ee borotiinka dhiiga ku jira ay sidoo kale ku jiraan candhuufta, kuwaas oo muujin kara isbeddel ku yimaada heerarka borotiinnada kala duwan ee dhiigga. Sidaa darteed, waxaa suurtagal ah in lagu ogaado cudurka iyada oo loo marayo baaritaanka candhuufta.
CE La Ansixiyay Kaadida DOA Koobka Tijaabada Degdega ah ee Dawooyinka
Kaadida CE la ansixiyay DOA koobka daawada degdega ah: Baaritaanka kaadidu waa baaritaan caafimaad. Oo ay ku jiraan falanqaynta kaadida joogtada ah, ogaanshaha qaybaha kaadida ee muuqda (sida kaadida unugyada dhiigga cas, unugyada dhiiga cad, iwm.), qaybaha borotiinka go'aaminta tirada, go'aaminta enzyme kaadida, iwm. Baadhitaanka kaadida ayaa aad muhiim ugu ah ogaanshaha kiliinikada, saamaynta daawaynta iyo saadaalinta.
Dawooyinka Badan 3 In 1 Gudigga Tijaabada Xirmooyinka Tijaabada Ku Xadgudubka Dawooyinka
Daawooyin badan 3-kiiba 1dii guddi tijaabo ah qalabka tijaabada xadgudubka: Tijaabada kaadidu waa tijaabo caafimaad. Oo ay ku jiraan falanqaynta kaadida joogtada ah, ogaanshaha qaybaha kaadida ee muuqda (sida kaadida unugyada dhiigga cas, unugyada dhiiga cad, iwm.), qaybaha borotiinka go'aaminta tirada, go'aaminta enzyme kaadida, iwm. Baadhitaanka kaadida ayaa aad muhiim ugu ah ogaanshaha kiliinikada, saamaynta daawaynta iyo saadaalinta.
12 Halbeegyada Baarista Reagent Kaadi
12meters test reagent kaadi: Baaritaanka kaadidu waa tijaabo caafimaad. Oo ay ku jiraan falanqaynta kaadida joogtada ah, ogaanshaha qaybaha kaadida ee muuqda (sida kaadida unugyada dhiigga cas, unugyada dhiiga cad, iwm.), qaybaha borotiinka go'aaminta tirada, go'aaminta enzyme kaadida, iwm. Baadhitaanka kaadida ayaa aad muhiim ugu ah ogaanshaha kiliinikada, saamaynta daawaynta iyo saadaalinta.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Tijaabooyinka Xadgudubka Daroogada oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Tijaabooyinka Xadgudubka Daroogada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Tijaabooyinka Xadgudubka Daroogada la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.